Sarimihetsika natambatra tamin'ny rantsan-tànana China niatrika fanamboarana sy fananganana volontsôkôlà plywood | Sulong
Sarimihetsika natrehin'i Plywood
Rantsan-tànana - Sarimihetsika mitambatra miatrika gitara
Sarimihetsika miady amin'ny slip slip miatrika gitara
Fonosana Tour & Fitaterana entana Factory
Combi Film niatrika gitara
Hexagon Anti-slip Film Miatrika gitara
Sarimihetsika vita amin'ny rantsan-tànana miatrika volon-trondro mainty
Poplar Film niatrika kapaoty
Ny fitaovana Birch dia manana mateza maharitra, henjana ary milamina.
Tsy misy seams na tasy. Mora ny manapaka, mandoko, fasika ary mandoko.
Ny plywood tsara amin'ny tsofa mihodina koa dia manana lakaoly tsara sy hery fametahana visy eo ambonin'ny tany.
Ny pôrnika tsy misy slip sulong dia novokarina tamin'ny alàlan'ny kasika birch any ivelany. Ny faharetana, ny fandeferana matevina henjana ary ny fanoherana ny kasety dia mahatonga an'ity plywood fototra ity malaza be.
Amin'ny maha mpamatsy plywood tsy-slip avo lenta azy, i Sulong dia manome antoka fa ny fitaovana dia manana fanoherana avo lenta indrindra, akanjo mihodina farafahakeliny (test test) ary fanoherana avo lenta (test Taber).
Satria sarimihetsika sarimihetsika ny veneer, ny lesoka amin'ny lamination ihany no jerena rehefa namboarina. Ho fanampin'izay, ny lesoka miharihary eo ivelan'ny kitay dia raisina ihany koa. Ny lafiny tsirairay amin'ny tontonana, na tsy solafaka na malama, dia mifanitsy amin'ny iray amin'ireto naoty manaraka ireto. I, II na III.
Ny rakotra tsy tantera-drano dia manana loko sy hakitroka samihafa. Ny sisin'ny tontonana dia voaisy tombo-kase amin'ny loko akrilika tsy tantera-drano.
Azonao atao ny mifandray amin'ny mpitantana anay ary mividy gitara tsy slip mivantana amin'ny mpanamboatra.
Previous: Fiaraha-miombona amin'ny filalaovana gitara
Manaraka: Horonantsary natambatra tamin'ny rantsan-tànana dia niatrika mena mena
Sarimihetsika natambatra tamin'ny rantsan-tànana no niatrika mainty plywood
Horonantsary natambatra tamin'ny rantsan-tànana dia niatrika mena mena
Faritra fampandrosoana toekarena, Tanànan'i Pizhou, faritanin'i Jiangsu, Sina